Snapchat yakavhura madhoo ayo makore mashanu chete apfuura. Nhasi uno pasocial media chikuva chakasimba kudarika nakare kose, uye zvinoita kunge ramangwana rayo rakajeka. Nekudaro, kana iwe uri muridzi webhizimusi ane makore anopfuura makumi maviri ekuberekwa, kuchine mukana wakanaka wausingazive mashandisiro aSpapchat.
Snapchat yakakura mugore rimwe chete zvakanyanya seTwitter mune ina. Kukura nekutonga kweSnapchat zvinoratidza kuti ndiyo yazvino pasocial network yaunofanirwa kutarisisa.
Editors noti: Mune ino posheni yemashandisiro eSnapchat, takagamuchira kutumira kwevashandisi kubva kune vedu blog blog. Ndiani ari nani kutibatsira kuti tinzwisise Snapchat pane anofarira mushandisi uye anoshuvira munyori, Mike Jones.
Mashandisiro Ekushandisa Snapchat Kukurudzira Kubatanidzwa
Mune ino posvo, tichakurukura manomwe maSpapchat matipi anovimbiswa kukupa iwe kukurudzira mune yako yemagariro midhiya kubatanidzwa.
Kutanga, zvakakosha kuti unzwisise iwo chaiwo musana kumashure kweSnapchat.
1 - Kunzwisisa Snapchat
Pasina kunyara kana kukumbira ruregerero, Snapchat akabudirira kuunza kadhi rakasiyana kune "vakomana vakuru tafura". Pane kupokana, nekuda kwekadhi iri, webhusaiti yacho inokunda yakawanda uye yakawanda ndima pakati pevanoshandisa vezvenhau mazuva ese.
Kadhi iri ndere Evanescence. Vagadziri kuseri kwaSnapchat vakanzwisisa kuti chinhu chimwe chinotsanangura nhaurirano yechokwadi kuve yechokwadi uye inodikanwa iri muchimiro, hunhu hwayo hunoparara. Iwe haugone kuwana dialog yakachengetedzwa pane chero rakaomarara dhisiki, asi iyo Snapchat inova ndangariro inokurudzira kunzwa mukati medu.
Mutemo iwoyo wekutaurirana zvine musoro unomira semutsipa weSnapchat yanhasi. Nhau dzinoonekwa kubva kuSnapchat dzinonyangarika pasina kana mushure meawa makumi maviri nemana kubva pakusikwa kwavo. Kubudirira kwechinhu ichi chitsva kunoita kuti tifunge kuti iyo Internet haifanire kuchengetedza hunhu hwedu (fungidziro inoshuvira).
Ichi chinonyangarika chiito chinounza dzimwe nhau dzakaipa uye nhau dzakanaka kana uchifunga nezvekuti ungashandisa sei Snapchat kune rako bhizinesi.
Nhau dzakaipa ndedzekuti une maawa makumi maviri nemana chete ekuratidza poindi.
Nhau dzakanaka ndedzekuti maawa makumi maviri nemana uine peji rakachena kuti ugadzire iyo yekubheka iyo inosimudzira kubatanidzwa.
2 - Kutsemura Snapchat Nhau
Mashandisiro ekushandisa Snapchat munzira yechisikigo uye yakasikwa yekusimudzira kubatanidzwa kurova Snapchat pamutambo wayo, kureva nekugadzira nyaya dzinogombedzera. Ipuratifomu inomhanya chose pane inobvaruka, ari mavhidhiyo kana mapikicha anovhura musuwo wenyaya. Uchishandisa mapfumo kusimudzira mhando yako:
Inokupa iwe kuwana kune yakaderera-mutengo wekushambadzira chiteshi iyo inogadzira yakanyanya hukama hwehukama
Inobata vashandisi mumwe nemumwe
Kuti unyatso shandisa maawa ako makumi maviri nemana, unofanirwa kuremekedza chinhu chakakosha chinosiyanisa mabhureki kubva kune mamwe mavhidhiyo kana mapikicha. Ndokunge - yega snap yakatumirwa - inofanirwa kuve ne hunhu hwakatsvuka.
Snapchat haidi bhajeti hombe kana zano rekushambadzira
Hunhu uhwu hunoreva kuti nyaya yekukasira haidi bhajeti hombe kana kufungisisa, asi inofanirwa kuburitsa meseji yekutanga, uye ive inongoitika. Snapchat haitaure mutauro webhizinesi. Asi asi, vatengi vanouya kuSpapchat kuzoratidza nyika yavo chaiyo kumeso uye kunakidzwa panguva imwe chete. Nekudaro, zvakakosha kuti ukanganwe nezvenzira dzekushambadzira paunenge uri paSnapchat uye nekuuya nenzira nyowani dzekuita kuti vatengi vaone chako.
Yese nyaya inogona kugashira inosimudzira nekushandisa Snapchat maficha. Mabhizimusi haafanire kudzora mashandisiro emalensi, kumeso swaps, emojis kana akakosha magwaro muzvinyorwa zvavo. Aya maficha anowedzera kubatanidzwa mune inonakidza uye yakasikwa nzira. Makuhwa ane izvozvo Snapchat ichaendesa zvirimo kune iyo 3D nhanho, saka gadzirira nzira nyowani dzekuendesa nyaya - munguva pfupi kupfuura yapfuura!
Nekutsemura Snapchat nyaya, mhedzisiro ichabatsira kugadzira kiyi yekubudirira. Rangarira izvo anotora ane maawa makumi maviri nemana kuti ave asingakanganwike kuburikidza nekuvimbika uye kwekutanga nekuratidza zvidimbu zvechokwadi zvinokurudzira zita rako kuhukuru.
3 - Ratidza Hunhu hweBrand yako
Vashandisi vanoita sarudzo vasati vajoinha Snapchat. Sarudzo iyoyo ndeyokuchera mafirita anoyevedza e Instagram uye kumanikidzwa kwekutumira chete "dzakakwana" nyaya paFacebook nekuda kwegodo reshamwari. Pane kudaro, vanotsvaga nzira nyowani dzekuratidza nyika hunhu hwavo chaihwo. Ichi chimiro chevanhu chingareva kufumura hunhu hwavo "husina kutonhorera", senge hupenzi kana mamiriro ezvinhu asina kunetsa.
Asati agadzira yavo yekutanga nyaya, mabhizinesi anofanirwa kudzidza kushandisa Snapchat munzira iyi nyowani yekushamwaridzana. Neraki, makambani anogona kusarudza kubva munzira dzinoverengeka kuita kuti zvigadzirwa zvavo zviwedzere uye kusimudzira kubatanidzwa.
Mashandisiro aungaita Snapchat kuita kuti zita rako rive rako pachako
Snapchat yekutengesa chete. Iyi nzira ndiyo ipuratifomu yakakwana paunogona kugadzira zvimwe zvakavanzika zvekutengesa. Ita shuwa kuti iwe unonyorera mushandirapamwe chete pano uye hapana kumwe kunhu. Iyi inzira yakanaka yekugadzira manzwiro enharaunda, uko chete maSpapchatters anokwanisa kunakidzwa nehukama hwega.
Snapchat kukwidziridzwa. Zvekare, iyi nzira ine yakasarudzika pakati payo, asi inopfuura ipapo. Ino nguva, vashandisi veSnapchat vanofanirwa kuita rimwe basa rekuwedzera kuti vawane mukana wekusimudzira. Kupa kunonakidza kuitisa, kunyanya kana munhu wese anenge atora chikamu akawana mubairo. Iko kutora chikamu kunowanzo kunamatira kune izvo Snapchatters vanonyanya kuda, iko kutora mifananidzo kana mavhidhiyo anoremekedza theme ine chekuita neyako brand.
Ongororo dzekusarudzika dzezvigadzirwa zvitsva. Usati waratidza pasi rako chigadzirwa chako chitsva, ipa nharaunda yako nenhau dzako dzega. Kuratidza Snapchatters chigadzirwa chako chero munhu asati agadzira yakasarudzika chisungo navo zvinoenderana nekuvimba. Iko kunakidzwa kwechigadzirwa chitsva chinhu chakakodzera kutaura nezvacho. Kumutsa mukana wechiitiko chehutachiona kunosimudzira kubatanidzwa.
Kuseri kwezviitiko mavhidhiyo. Snapchat inopa vashandisi vayo nharaunda inoshamwaridzana kutumira zviitiko zvezuva nezuva. Sezvo pasina munhu ane mazuva akakwana chete akateedzana, anobhururuka nezve zvakajairika zviitiko zvezuva nezuva zvinonyanya kukosheswa pano.
Chako hachizi chigadzirwa chehunyanzvi chete. Mhando dzinogara dzakatarisana, misangano, mazuva ese emahofisi maitiro, mapato emahofisi, kicheni ine kofi, nezvimwe. Ratidza Snapchatters kuti ivo chikamu chenharaunda yako kuburikidza neaseri kwemavhidhiyo mavhidhiyo anovashamisa. Zvakaita se:
Iyo yakapenga yekufunga pfungwa yechikwata chekushambadzira
Ruzivo rwefilosofi pakati pevanoshanda navo pamusoro pekofi
Maitiro ekugadzirwa kwechigadzirwa
Vashandisi vanonzwa kuti vanogona kuenderana neyako mhando, inoiisa sevanhu.
4 - Bvumira Vanotora
Kune vazhinji vane simba Snapchatters vane mazwi anokurudzira zviuru zvevateveri zuva nezuva. Kunyangwe yakakura nyaya ndeye mukana wekuti kune vakakosha vanokurudzira kunze uko vane chekuita nemunda wako.
Iri izano rakanaka rekutsvaga hunhu hunozivikanwa mukati menzvimbo yeSnapchat uye ubate navo nechinangwa chekushandira pamwe. Semuenzaniso, mutengesi wezvipfeko, Wet Seal akashanda pamushandirapamwe weSpapchat uyo wakatorwa zvese neanoshusha ane zita rekushandisa MsMeghanMakeup. Aive nenharaunda yevanopfuura mazana matatu evateveri, uye ruzivo rwake neiyi nharaunda yemagariro rwakamugonesa kuunganidza 300,000 kubatana mumavhiki maviri chete kumutengesi wefashoni.
Isu taida kufunga nezvekuti tingawedzera sei kusvika kwedu, saka takabatana nemukurudzira munzvimbo yevechidiki. - Leslie Hall, Mutungamiri kuWet Seal's digital agency ICED Media
Mushandirapamwe uyu wakaratidza kumwe kwekushanda kwakanyanya kusimbisa kwakasimbiswa naSpapchat.
→ Kiyi Yekutora: Bvumira rubatsiro rwevanokurudzira, kunyanya kana yako Snapchat mbiri iri pakutanga kwayo.
5 - Activate Snap Ads
Snapchat yaita kuti zvive nyore kumabhizinesi emarudzi ese kushambadza papuratifomu yayo. Iyo webhusaiti nguva pfupi yadarika yakaunza sarudzo ye snap ads, ayo angangoita gumi-echipiri mavhidhiyo ekusimudzira anowoneka pakati penyaya Aya ma ads anoita kunge akafanana zvakajairwa - izvo zvinovapa ivo zvakasikwa zvakasikwa. Iwe unogona zvakare kusanganisira swipe kumusoro sarudzo, sedzimwe snaps, kutungamira vanoona kumapeji ane mamwe mashoko, senge mawebhusaiti, akareba mavhidhiyo, uye zvinyorwa.
Snap Ads inogona kuoneka kunyangwe panguva mhenyu snap. Ivo vanogona kunongedza vateereri zvinoenderana nehunhu, zera, mhando yezvinyorwa zvavanobata nazvo kana nhare mbozha mabasa. Chii chinonakidza ndechekuti Snapchat akawana kuti iyo tinya kuburikidza chiyero pane Snap Ad iri 5x yakakwira kupfuura pane mamwe mapuratifomu enharaunda.
6 - Simba reGeofilters
Snapchat haishandisi ma hashtag, asi zvakadaro iine yakafanana vhezheni yavo. Aya ma hashtag matsva ndiwo maSpapchat geofilters. Idzi ndidzo shongedzo diki dzinoonekwa pane dzinobvaruka. Iko kushandiswa kweiyo geofilters ndeyekurega vataridzi vazive nzvimbo yeSnapchatter nekuratidza zita reguta, nharaunda kana dzimwe nzvimbo.
Mabhizinesi ikozvino anogona kugadzira anotsigirwa geofilters yavo voga. Pese pavanoshandisa mufananidzo, vane mukana wekushandisa firita yenzvimbo kuti vatsanangure kuti varipi. Unyanzvi hushoma hunogona kuvhara mabhawa, zvitoro kana maresitorendi, asi ivo vanogona kutoshingairira panguva yechiitiko.
Nenzira iyi, kana bhizinesi risina imwe nzvimbo, timu yekushambadzira inogona kubata makwikwi uko maSpapchatters anofanira kunge ari mune imwe nzvimbo, shandisa iyo geofilter yechiratidzo, uye uine mukana wekuhwina mubairo unonakidza. Snapchat inoti geofilter inotsigirwa nenyika kubva kuUS inogona kusvika 40% kusvika 60% yevashandisi vayo vezuva nezuva. Uye kana iwe uchifunga nezve izvo izvo Snapchat ine vakakomberedza mamirioni zana evashandisi ezuva nezuva, iwe unogona kungoona mangani mageofilters anogona kusimudzira kubatanidzwa.
7 - Yakatsigirwa maLensi
Pane nzira yechitatu yekudyara mukushambadzira kweSnapchat. Chinhu chinodakadza pane ino yehukama chikuva ndiyo lens. Vashandisi vanogona kuwedzera izvi zvinopindirana pamusoro pefoto kana vhidhiyo, uye mhedzisiro yacho inosetsa uye inovaraidza. Vashandisi vanogona ikozvino kukanda kumusoro kunaya kwemvura, vane kitty kumeso, maziso makuru, shanduko kuita zombies kana ane mukurumbira mavara
Mabhizimusi anogona kujoina iyi yakakurumbira maitiro neanotsigirwa lenzi. Vanotora mukana vanofarira kuda malenzi anotsigirwa uye vanoashandisa kuti vashandure mabhureki avo. Uine bakoat imwe chete - sekureba sekunge iwe ukauya neyaka nyowani uye inonakidza kushanduka pane chiitiko chevashandisi! Snapchat akaongorora iyi yemagariro ficha uye akawana kuti vashandisi vavo vanotamba kutenderera makumi maviri masekondi paavhareji neSponsored Lens. Izvo zvinopa mabhizinesi mukana wakakwana wekusimudzira zvakajeka kubatanidzwa kwemaoko avo.
Ndinovimba, neaya matipi manomwe, iwe une ruzivo rwakakwana rwekuti ungashandisa sei Snapchat kusimudzira kubatanidzwa kwakawanda nekara rako. Iwe unoona iyo Snapchat mushandirapamwe mune ramangwana rako? Zvese zviratidzi zvinotsigira izvo Snapchat inofanirwa kuve chikamu chemasocial media yako musanganiswa. Nekudaro, ikozvino inguva yakakwana yekukwira iyo Snapchat chikepe kuti uwedzere brand kuziva.
The post Mashandisiro Ekushandisa Snapchat Kukurudzira Yemagariro Midhi Engagement yakatanga kutanga dlvr.it blog.
Yemagariro Midhiya Kushambadzira: Iyo Yekupedzisira Gwara
Nzira Yekuita Instagram Inonzi Animated Nyaya Dzakasununguka
Maitiro Ekuwedzera Yako Instagram Engagement Rate
Mutungamiri Wako kuMutambo Mukuru weZviNhau dzeZvaMutambo weChisimusi 5